Dhaamsa Irreecha Bara 2021(Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO) | KELLO MEDIA (Onkoloolessa 2, 2021) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDhaamsa Irreecha Bara 2021(Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO) | KELLO MEDIA (Onkoloolessa 2, 2021)
Dhaamsa Irreecha Bara 2021(Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO) | KELLO MEDIA (Onkoloolessa 2, 2021)
Ayyaanni Irree lafa galateeffannaa fi dirree qabsoo Bilisummaa Oromoo ta’uu uummatni mirkaneesse
Keelloo: Onkoloolessa 2,2021
Ayyaanni Irreechaa dirree galateeffannaa waaqa uumaa Oromoo akkasumas dirree qabsoo Bilisummaa Oromoo ta’uu isaa sochiiwwan ayyaanicha irratti agarsiifaman nii mirkaneessu.
Bakka ayyaana Irreechaa kanatti dargaggoota Oromoo Miliyoonaan lakkaa’amu wal arga. Dargaggeessi Oromoo kun ammoo miira uummata isaa ibsuuf wal haamileessee waan fedhu faarsee waan hin feene mormuu fi abaaruuf hiree argata.
Hora harsadee irratti dargaggoonni Oromoo ukkaamsaa waggaa dheeraaf ture bara 2016 futtaafachuun sagalee isaanii dhageessifatan. Sagaleen gaafa sanaa “Down Down Wayyaanee” jedhu dhageessifamee osoo hin turin Wayyaanee irratti dheekkamsi jabaan baname.
Haalli kun uummatni Oromoo ayyaantummaa qabaachuu isaa fi himee dhageessifachuu akka danda’u ulaa mirkaneessu ta’uu isaatu eerama.
Har’as sochii waggoota sadii ukkaamsaa jalatti miidhaa fi roorroo saba isaa irra gahu didee uummatni Oromoo hora Finfinnee irratti sagalee dhageessisaa akka jiru odeessi nu gahee jira.
Kana malees sagaleen Abiyyiin hin bullu, Abiyyi hin barbaannu jedhu dhagaa’amaa akka jiru dubbatama. Waan darbeef akkaataa raawwii kadhata Oromoo kan mirkaneessu irraa ka’uun mootummaan Irreecha irratti abaarame oolee hin bulu nii bada yaadni jedhu fuula miidiyaa hawaasaa irraan deddeemaa jira.
Kunis uummatni dilli miliyoonaan lakkaa’aman kunneen mootummaa saba isaanii cunqursaa, ajjeesaa, hidhaaf hiraarsaa jiru waaqni akka irraa buusu kadhataa jiraachuu erga dhaga’amee booda ture miidiyaan hawaasaa ooda kana kan wal harkaa fuudhee haasa’uu eegale.
Guyyaa har’aa sagaleen hidhamtoota Oromoof ta’ameera. Kana malees mootummaa biyyan bulcha jedhaa jiru akka irraa ka’u sagaleen dhageessifamaa ooluu mirkaneeffannee jirra.
Akkasuma dhaadannoon “Rigaa Kasaa yaa rigaa Kasalaa…” jedhu qondaalota PP uummata arrabsu jedhaman irratti adeemsifamaa ooleera.
Waraanni Bilisummaa Oromoo wiirtuu furmaata qabsoo bilisummaa Oromoo ta’uu lallabamaa oolee ittis jira. Kun daranuu mogolee qabsaawotaa Bilisummaa dirree Oromiyaa biyya abbaa isaanii Bosona keessa jiraniif nii ta’a jedhamee abdatama.
Ayyaanni Irreechaa kan Hora Finfinneetii alatti kabajamuu isaas Keelloon mirkaneeffatee jira. Kunis Kaaba Shaggar keessatti yoggaa ta’u waraanni Bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin horatti bahee kabajuu isaa suuraan miidiyaa hawaasaa Facebook irratti wal harkaa fuudhuun tamsaa’aa jira. Kun daranuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo akka gabbatee jiru uummatni akka hubatu taasiseera.
Waraanni Bilisummaa Oromoo uffata waraanaa uffatee uummata waliin ayyaana Irreechaa kabajuun kan miilanaa kun isa addaati. Ta’ii hanga har’aa dhiheenyatti raawwatee hin beekne yoo ta’u qaamolee mootummaaf yaaddoo yoo uumu uummataaf deggartoota qabsoo bilisummaa Oromootti haamilee horuu hin oolle.
Haalli ayyaana Irreechaa har’aa miidhagaa fi hawwataa ta’uu dhagaa’ama. Miidhagina ayyaanichaaf uummatni Oromoo gahee irraa eegamu bahatee jira. Kana malees rakkoo uummatni Oromoo keessa jiruu fi kijiba qaamolee mootummaa saaxiluun danda’ameera jedhamee jira.
Qaamoleen mootummaa fi miidiyaalee leellisa mootummaa irratti xiyyeeffatan ayyaanichi akka nagaan gaggeeffamaa jiru gabaasu. Dhugaa qabatamaa jechuun kan uummatni Vidiyoo dhaan agarsiisaa jiru garuu reebichi waraana mootummaan raawwatamaa akka jiruu fi isuma keessa dhaabbatee uummatni mormii isaa dhageessisuudha kan eerame.
Ayyaanni Irreechaa bakka galateeffannaa, kadhannaa Waaqa uumaa qofa utuu hin taane dirree qabsoo Bilisummaa Oromoo ta’uu isaa haalli achitti adeemsifamu ragaa baha.
OMN- Irreecha 2021-- Dhaamsa obbo Dinquu Dayyaasaa (Fulbaana 30, 2021)
OMN: -ፔንዱለም(sep 30-2021) OMN- Irreecha 2021-- Dhaamsa obbo Dinquu Dayyaasaa (Fulbaana 30, 2021) የአሜሪካ ማዕቀብ…
OMN: Horn Oolmaa Irreecha Hora Fifinnee (ONKOLOOLESSA 2, 2021) OMN Irreecha Birraa fi Tulluu Ful…
We invite you all to Irreecha in Washington DC, the capital city of USA. Let…
The Ethiopian uncivil war; TDF, Woldiya, Kobo, Chifra, Debre Zabit